Labo fannaaniin oo loo aqoonsadey kuwa ugu fiican Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Labo fannaaniin oo loo aqoonsadey kuwa ugu fiican Muqdisho
Labo fannaaniin oo loo aqoonsadey kuwa ugu fiican Muqdisho
Arbaco 15, August, 2018, Muqdisho (SNTV) Kulankan oo ay ka soo qayb galeen madaxda iyo xubno katirsan Golaha Abwaanada Soomaaliyeed, Qaar kamid ah Fanaaniinta SOomaaliyeed, Miyuusikyahanno, Khuburro katirsan Fanka SOomaaliyeed, Agaasimaha Guud ee WW.Dh. & Dalxiiska Soomaaliya, iyo martisharaf kala gedisan oo lagu casuumay kulanka.
Intii uu kulanka socday kulanka Golaha Abwaanada Soomaaliyeed waxa ay qiimeeyn kusameeyeen gaar ahaan Fanaaniinta da’da yar kuwaasi oo ay kamid yihiin Khadar Keyow iyo Sacdiya Siman kadib markii ay halkaasi iyaga iyo fanaaniin kale ay kusoo bandhigeen heeso kala duwan oo ay dhageysteen dadkii kazoo qayb galay kulankaasi.
Khadar Keyow iyo Sacdiyo Siman ayaana ku guuleeystay in loo aqoonsado fanaaniinta sanadka 2018-ka.
Agaasimaha guud ee WW.Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Alcadaala oo halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa isagoo ku hadlayay afka Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Mudane Daahir Max’uud Geele oo safar shaqo ku maqan ku aammaanay Golaha Abwaanada Soomaaliyeed iyo dadkii kasoo shaqeeyay in ay maskaxdooda geliyaan taabagelinta howshan.
Khadar Keyow iyo sacdiyo Siman ayaa lagu guddoonsiiyey abaal marino katurjumaysa guusha qiimeynta kadib, Khadar Keyow oo hadal ka jeediyay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay qiimeeynta la sameeyay, isagoo u mahadceliyay Guddiga shaqada hagar la’aaneed ay qabteen si lamid ah dadkii gacan kusiiyay inuu noqdo fanan ku heesa afka hooyo.
Previous articleGuddoomyaha Gobolka Banaadir oo shaqada ka joojiyey saraakiill lagu eedeeyey musuq-maasuq
Next articleR/wasaare kuxigeenka Dalka oo Daah furay Carwada Bandhiga Buugaagta ee Muqdisho